स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्रको परीक्षण छपाइ सुरु » खबरहरुको एउटै केन्द्र
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्रको परीक्षण छपाइ सुरु
आईतवार, चैत्र ६, २०७३ ०६:३३ मा प्रकाशित !
६ चैत, काठमाडौंँ। आगामी २०७४ वैशाख ३१ गते आइतबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्रको शनिबारबाट परीक्षण छपाइ सुरु भएको छ । परीक्षणका रूपमा छापिएको मतपत्रको कागज सेतो र मसी नीलो छ ।
निर्वाचन आयोगले मतपत्रको छपाइ कार्य चैत ५ बाट सुरु हुने जनाएको भए पनि मतपत्रको डिजाइन गर्ने कार्यमा केही ढिलाइ हुँदा छपाइ कार्यमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ। आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, ‘‘आयोगका प्रमुख आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवसहित आयुक्तहरू शनिबार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र गई नमुना मतपत्र छपाइको अवलोकन गरे । सम्भवतः आइतबार साँझबाट औपचारिक छपाइ सुरु हुनसक्छ । ’’
आइतबार दिनभरिमा आयोगले आफ्नो प्रक्रियालाई पूरा गरेमा आइतबार साँझबाट निरन्तर रूपमा छपाइ सुुरु हुनेछ । मतपत्रको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दीएको छ ।
आयोगले करिब एक करोड ४० लाख मतदाता हुने अनुमान गरी करिब एक करोड ६० लाख मतपत्र छपाइ गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ । मतदाता नामावली प्रशोधनको कार्य भइरहेकाले औपचारिक मतदाताको सङ्ख्या आउन बाँकी छ ।
आयोगले छ आकार (साइज)का र ७५ जिल्लाका लागि ७५ वटै प्रकारका मतपत्र छपाइ गर्ने तयारी गरेको जानकारी पनि प्रवक्ता शर्माले दिए । आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि केन्द्रमा तथा ७५ वटै जिल्लामा दलहरूको दर्ता गरी निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सहज बनाएको छ ।
काठमाडौंँ जिल्लामा सबैभन्दा बढी ४७ र मनाङमा सबैभन्दा कम ६ वटा दल दर्ता भएका छन । जिल्लामा दर्ता नभएका दलले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उम्मेदवारी दिन सक्नेछन । त्यसैगरी हाल व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले मात्रै २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनका लिएको निर्वाचन चिह्न पाउनेछन भने अन्य दलले स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा निर्वाचन चिह्न पाउनेछन । आयोगमा हाल ११३ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन ।
PREVIOUS POST Previous post: क्षयरोग संस्थाको अध्यक्षमा प्रधान निर्विरोध निर्वाचित
NEXT POST Next post: स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गर्ने युवायुवतीका चुनावी उत्साह
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, चैत्र ६, २०७३ ०६:३३
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, चैत्र ६, २०७३ ०६:३३
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, चैत्र ६, २०७३ ०६:३३
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, चैत्र ६, २०७३ ०६:३३
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, चैत्र ६, २०७३ ०६:३३